मनोरञ्जन Archives - Page 102 of 120 - Samudrapari.com
२८ कि युवती सेक्सी
लन्डन- तपाईंलाई कति वर्षकी युवती बढी सेक्सी लाग्छ ? १६, २० वा २५ वर्ष उमेरकी ? तर अध्ययनले देखाएको छ युवती २८ वर्षकी हुँदा आफूलाई बढी सेक्सी ठान्छे । अध्ययनले २८ वर्षकी युवतीले आफूलाई मस्त जवान देख्छे, उसले आफूले आफैंलाई पटक पटक हेर्दछे र सेक्सी महसुस गर्दछे । ३२ वर्षकी महिलामा भने आत्मविश्वास बढेर आउने अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसबेला ती महिलाले परिवार र समाजका लागि योगदान दिन सक्छे ।
पहिलो ‘मिस दाङ-२०१२’ प्रतियोगिता हुँदै
दाङ - दाङमा पहिलोपटक 'मिस दाङ-२०१२' प्रतियोगिता हुने भएको छ । 'मिस दाङ -२०१२' को आयोजक संस्था पेज- ३ इन्टरटेनमेन्टले शुक्रवार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी 'मिस दाङ प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी गराएका हुन् । इफोर इन्टरटेनमेन्टको सहकार्यमा हुन गैरहेको मिस प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी दिँदै पेज-३ का डाईरेटक्टर थम्मन भण्डारीले यसक्षेत्रका युवा महिलाहरुको प्रतिभा बाहिर ल्याउने उद्देश्यले 'मिस दाङ -२०१२' को आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । मनोरञ्जन सँगसँगै यसक्षेत्रका प्रतिभाहरुलाई स्थान दिने उद्देश्यल...
दीपक, इन्दिरा र ज्योति जापानमा
टोकियो - तमु धीं जापानको आयोजनामा हुने रोधी साँझका लागि कलाकारहरु जापान आएका छन् । यही अगस्त-१२तारिख आइतबारका दिन टोकियोको इकेगामी खाइकन हलमा हुन गईरहेको १६ औ रोंधि सांझका लागि आमन्त्रित कलाकारहरु आज- ९ तारिख २:०० बजे जापान आएका हुन् । आमन्त्रित कलाकारहरु गायक दीपक लिम्बू, गायिका इन्दिरा जोशी र लोकदोहोरी गायिका ज्योति लोहोनलाई टोकियोको हानेडा अन्तरराष्ट्रिय बिमान स्थलमा धीं का अध्यक्ष हर्क तमु, कार्यक्रमका संयोजक ओम प्रकाश तमु, सह-संयोजक युक्तमान तमु, सल्लाहकार दिनेश तमु, सल्लाहकार ईश्वर तमु र...
एउटी बार गर्लको कथा
स्टेजमा रंगीबिरंगी बत्ती बलिरहेको छ । साथमा चर्को आवाजमा गीत बजिरहेको छ, 'छुनलाई होइन, हेर्नलाई पाइन्छ, उध्रेको छ यो चोली, त्यै पनि लाइन्छ...' । त्यही गीतको हाउभाउमा नाचिरहेकी छिन्, कविता -नाम परिवर्तन) । केही क्षणमा गीत सकिन्छ । तर, बत्ती निभ्दैन । तुरुन्तै सुरु हुन्छ नयाँ हिन्दी गीत, 'मुन्नी बदनाम हुई डार्लिङ तेरे लिए..' । तर, कविताको ठाउँमा अर्कै एक युवती स्टेजमा देखापरिसकेकी छिन् । कविता फ्लोरमा बसेका ग्राहकनजिक जान्छिन् र चर्को गीतको आवाजका कारण ग्राहकको कानैमा गएर सोध्छिन्, 'दाइ, के ल्याउ“...
रेखा थापाको मिनिस्कर्ट रहस्य
एक दिन सुटिङमा जानेबेला रेखा थापा आफ्नो मिनिस्कर्ट खोज्दै थिइन् । नभेटेपछि श्रीमान् छवि ओझालाई सोधिन्, ‘डयाडी, (रेखा आफ्नो श्रीमानलाई डयाडी भन्छिन्) तपाईंले मेरो गुलाबी कलरको मिनिस्कर्ट देख्नुभयो ?’ छवी : ए, त्यो त मैले धोएर थन्क्याइदिएको छु । रेखा : कहाँ छ त ? छवि : ऊ त्यो सलाइको बट्टाभित्र ! आफ्नो नयाँ फिल्म ‘सालीको पोइ’ को प्रिमियर हेर्न हल गएकी रेखालाई बेस्सरी पिसाबले चाप्यो । हाफ टाइम हुनासाथ उनी दौडिँदै शौचालयभित्र छिरिन् । तर, त्यो परेछ पुरुष शौचालय । आफ्नो पछिपछि धेरै पुरुषक...
काठमाडौं– राजनीतिक घटनालाई आधार मानेर बनाइएको नेपाली फिल्म नागरिकको छायांकन सकिएको छ । विमल पौडेलको निर्देशनमा बनेको नागरिकमा रमेश बुढाथोकी, गणेश उप्रेती, अनु शाहलगायतले अभिनय गरेका छन् ।
यस्तो छ ६ सय वर्ष पुरानो ब्रा र पेन्टी
अष्ट्रिया– महिलाका लागि भित्रि कपडाकारुपमा ब्रा र पेन्टी अनिवार्यजस्तै भएको छ । बजारमा खाल खालका ब्रा र पेन्टी उत्पादन भइरहेका छन्, अझ भनौं जापानले त गर्मीमा चिसो हुने ब्रा समेत ल्याइसकेको छ । तर पुरानो ब्रा चाँही कति वर्षअघिको होला ? अष्ट्रियामा अहिलेसम्मकै पुरानो ब्रा र पेन्टी भेटिएको छ । ल्याप परीक्षण तथा पुरातात्विक खोजमा उक्त ब्रा र पेन्टी ६ सय वर्ष पुरानो भएको पत्ता लागेको समाचार एजेन्सी एपीले जनाएको छ । उक्त ब्रा र पेन्टी एक पुरानो दरवारमा भेटिएको थियो । अनुसन्धानकर्ताहरुले ब्रा र पेन्ट...
धुर्मुसे र माग्नेबुढाको गाईजात्रे टोली फुट्यो
काठमाडौं- गत वर्षको गाईजात्रादेखि फुटेका केदार घिमिरे (माग्नेबूढा) र सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले यसपटक पनि अलग अलग गाईजात्रा टोलीमा सहभागी हुने भएका छन् । उनीहरुको चर्चित टेलिसिरियल मेरी बास्सैमा अलग अलग कथामा देखिएका उनीहरुले गाईजात्रे टोली पनि अलग बनाएका छन् । धुर्मुस दीपकराज गिरी नेतृत्वको तिते-जिरे-मेरीबास्सै टोलीमा छन् भने माग्नेबुढा मेरीबास्सै-झ्याईंकुटी झ्याईं-जय होस् टिममा छन् । साउन १८ देखि पहिलेझैं यसपालि पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय सभागृहमा छुट्टाछुट्टै महोत्सव हुनेछ । सभागृह...
प्रकृतिका बरदान भन्दै पुनमले देखाइन्
मुम्बई- भारतमा अनेक बहानामा चर्चामा रहने रुचाउने मोडल पुनम पाण्डेले फेरि अर्को फण्डा ल्याएकी छन् । माइक्रोब्लग टि्वटरमा उनले नयाँ तस्बिर राखेकी छन् । सेतो कालो बिकीनी लगाएकी उनले आफ्ना स्तनलाई प्रकृतिको बरदान भनेकी छन् ।
मनीषा कोइरालाको डिभोर्स !
काठमाडौं– अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले डिभोर्स गरेको हल्लाले फेरि एकपटक फिल्मनगरी तातेको छ । भारतीय पत्रपत्रिका र भारतीय अनलाइनहरुले मनीषाले डिभोर्स गरेको दाबीसहितको समाचार छापेपछि फिल्मनगरी तातेको हो । दुई वर्षअघि नेपाली व्यवसायी सम्राट् दाहालसँग लगनगाँठो कसेकी उनको पारिवारिक बेमेल ६ महिना नपुग्दै सुरु भएको थियो । भारतीय दैनिक अमर उजालाका अनुसार एक भारतीय फिल्मको सुटिङमा मुम्बईमा रहेकी मनीषा केही दिनअघि काठमाडौं फर्केर पुनः मुम्बई गएकी हुन् । ‘डिभोर्स गर्दा कत्ति पनि उनलाई दुःख महसुस भएको पाइएन,...